आर्थिक विकासको मार्गचित्र | गृहपृष्ठ
सोमवार, चैत्र ५, २०७४
As of 2018-03-19 15:00:00
ADBL 325 (5937) (-9)
AHPC 172 (1532) (2)
AKPL 245 (1016) (-13)
ALICL 690 (1099) (-12)
API 276 (16667) (-30)
ARUN 138 (2070) (-5)
BARUN 189 (1327) (5)
BBC 1855 (200) (16)
BFC 125 (135) (-1)
BNT 6100 (60) (81)
BOKL 355 (5554) (-6)
BPCL 483 (2706) (0)
CBBL 900 (1040) (-1)
CBL 150 (23360) (-3)
CCBL 172 (9295) (-4)
CFCL 122 (1000) (-1)
CHCL 750 (8879) (-10)
CHL 151 (211) (-5)
CIT 2998 (10499) (98)
CLBSL 695 (25) (-13)
CZBIL 260 (12414) (-3)
DBBL 140 (2095) (0)
DDBL 740 (1006) (3)
DHPL 122 (80) (0)
EBL 726 (8964) (-11)
EDBL 356 (250) (-2)
EIC 1288 (225) (-11)
FMDBL 516 (565) (-9)
FOWAD 1799 (920) (-29)
GBBL 184 (7218) (-3)
GBIME 312 (12756) (-1)
GDBL 226 (5626) (-3)
GFCL 133 (553) (-1)
GILB 1127 (208) (-23)
GIMES1 9.7 (40000) (-0.2)
GLICL 738 (1270) (-13)
GUFL 123 (21754) (0)
HAMRO 146 (925) (0)
HBL 596 (1062) (-7)
HDL 984 (60) (-16)
HGI 432 (1151) (-7)
HIDCL 151 (10949) (0)
HPPL 307 (570) (5)
ICFC 195 (4316) (-1)
IGI 814 (80) (-1)
JBBL 145 (5349) (-1)
JBNL 161 (18607) (2)
JFL 163 (250) (3)
JSLBB 2500 (36) (0)
KADBL 202 (62) (6)
KBBL 223 (2609) (0)
KBL 263 (24645) (-4)
KEBL 245 (85) (-20)
KKHC 134 (110) (-1)
KMCDB 1094 (550) (-31)
KNBL 144 (648) (-2)
KRBL 122 (5486) (-2)
KSBBL 151 (9491) (-2)
LBBL 154 (2105) (0)
LBL 246 (6940) (-4)
LGIL 507 (1880) (-1)
LICN 1698 (1239) (-2)
LLBS 990 (2091) (-10)
MBL 222 (22370) (-4)
MDB 277 (120) (4)
MERO 1122 (281) (-7)
MFIL 127 (6314) (-1)
MLBBL 925 (30) (-13)
MLBL 176 (33501) (1)
MMFDB 2571 (205) (-38)
MNBBL 404 (5231) (-3)
MSLB 2400 (190) (-5)
MSMBS 650 (331) (-3)
NABIL 1015 (12030) (-10)
NABILP 818 (3577) (-2)
NBB 234 (12325) (1)
NBBL 2082 (10) (-42)
NBF1 16.14 (35673) (0.01)
NBL 315 (19906) (-9)
NCCB 271 (15961) (-2)
NEF 9.8 (5028) (0.05)
NGBBL 529 (1070) (7)
NGPL 216 (558) (-2)
NHDL 186 (80) (-3)
NHPC 98 (14740) (1)
NIB 655 (14330) (-1)
NIBLPF 9.4 (4975) (0.25)
NIBPO 572 (3685) (-7)
NIBSF1 11.2 (13000) (0.1)
NICA 319 (17787) (-5)
NICL 945 (110) (12)
NIL 532 (900) (-8)
NLBBL 660 (130) (-2)
NLG 803 (1151) (-12)
NLIC 1715 (17936) (-9)
NLICL 1190 (2749) (-16)
NMB 435 (5900) (-1)
NMBHF1 9.35 (806) (-0.02)
NMBMF 1360 (71) (0)
NMBSF1 12.35 (5000) (0.03)
NMFBS 1905 (180) (-13)
NNLB 1862 (10) (-38)
NTC 736 (1780) (0)
NUBL 1065 (350) (-5)
ODBL 183 (9326) (-2)
OHL 511 (1480) (-6)
PCBL 292 (7950) (0)
PFL 155 (290) (1)
PIC 1000 (1552) (-29)
PICL 655 (1429) (-5)
PLIC 571 (3614) (-4)
PRIN 620 (1550) (-10)
PROFL 168 (102) (-2)
PRVU 215 (12343) (-1)
PURBL 196 (218) (-3)
RBCL 10501 (250) (-100)
RBCLPO 9800 (253) (-100)
RHPC 129 (250) (-1)
RMDC 598 (2185) (-5)
RSDC 739 (1211) (-1)
SADBL 172 (3029) (-6)
SAEF 10.2 (32500) (0.49)
SANIMA 350 (18710) (-3)
SBBLJ 198 (600) (2)
SBI 558 (1801) (4)
SBL 300 (11514) (0)
SCB 893 (6771) (0)
SDESI 488 (36) (27)
SEF 9.7 (22500) (0.1)
SFFIL 275 (10) (3)
SHINE 275 (726) (3)
SHL 240 (4790) (-4)
SHPC 341 (10534) (-3)
SIC 1293 (395) (-4)
SICL 1050 (2600) (0)
SIFC 226 (71) (-4)
SIL 780 (1279) (-15)
SKBBL 1100 (2712) (-8)
SKDBL 128 (550) (-2)
SLBBL 1353 (50) (-27)
SLBS 1145 (380) (-41)
SLICL 715 (682) (5)
SPDL 137 (783) (2)
SRBL 246 (6604) (4)
SWBBL 1170 (379) (-15)
TNBL 188 (212) (0)
TRH 261 (4360) (-14)
UIC 849 (1666) (-46)
UMB 516 (10) (10)
UMHL 175 (1370) (-3)
VLBS 735 (80) (-22)
WOMI 1400 (94) (-17)
Home लेख | दृष्टिकोण आर्थिक विकासको मार्गचित्र
लेख | दृष्टिकोण5views
आर्थिक विकासको मार्गचित्र
डा. देवीप्रसाद आचार्य
मुलुक लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता, असमझदारी, लडाइँ, झगडा र द्वन्द्वले ग्रस्त भयो । माओवादीले चलाएको १० वर्षे जनयुद्घले धेरै कलकारखाना बन्द भए । जनआन्दोलन २०६२/६३ पछाडि १ दशकको अवधिमा राजनीतिक सङ्क्रमण कालका रूपमा रह्यो । भ्रष्टचार, महँगी, कालोबजारी, बेरोजगारीको समस्याले मुलुक आक्रान्त बन्यो । संविधान निर्माणको रस्साकस्सीमा दलहरूले १ दशक खर्च गरे । दुईदुई पटकसम्म संविधानसभाको चुनावी खर्च, आर्थिक नाकाबन्दी, बन्द, हडतालले आर्थिक रूपमा देश अगाडि बढ्न सकेन । बारम्बार सरकारको फेरबदल, दलहरूको टुट, फुट र जुटजस्ता राजनीतिक कर्मले विकास निर्माणका कार्य ठप्प भए । विकास बजेट खर्च हुन सकेन ।
राजनीति दलहरूले पहिले संविधान बनेपछि देश तीव्र आर्थिक समृद्घितर्फ अगाडि बढ्छ भनेका थिए । लामो समयको राजनीतिक बहसपछि २०७२ सालमा राष्ट्रको ढुकुटीको अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरी संविधान बनाइयो । संविधानमा रहेका व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टिले मधेश आन्दोलन, नेपाल बन्द, हडतालजस्ता समस्याले देशले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो । राज्य राजनीतिक व्यवस्थापनमै अल्झिरह्यो । आर्थिक विकासमा राज्यको ध्यान जान सकेन । दलहरूको व्यापक आलोचना भइरहँदा नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनपछाडि देशमा तीव्र आर्थिक विकासको लहर आउने कुरा चर्को स्वरमा भन्न थाले । राजनीतिक असमझदारीको बीचमा नै राज्यले स्थानीय तहको निर्वाचन ग¥यो । निर्वाचन भएको निकै महीना बितिसक्दा पनि जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहको विकास निर्माणका कार्यमा अलमलिइरहेको नागरिक गुनासो छ । मुलुक अहिले प्रदेशसभा र केन्द्रीय सभाको निर्वाचनमा होमिएको छ । दलहरूले यो निर्वाचनपछाडि विकासको मूल फुटाउने कार्ययोजनाहरू घोषणापत्रमा उल्लेख गरी मतदातालाई आकर्षित गर्ने कार्यमा व्यस्त छन् ।
वाास्तवमा नेपाली नागरिकलाई एउटा संविधानको पुस्तक मात्र चाहिएको होइन, देशको विकास चाहिएको हो, आर्थिक समृद्घि चाहिएको हो । के साँच्चै अब दलहरूले भनेझंै मुलुकमा आर्थिक विकास हुन सक्छ त ? के आजसम्म देश विकासको बाधक यसभन्दा अगाडि बनेका संविधानहरू नै थिए त ? नेपालको कुन संविधानको कुन धारा वा उपधाराले मुलुकको विकास गर्न दिएको थिएन त ? राज्यसँग कुनै भरपर्दो जवाफ छैन । साँचो अर्थमा संविधानमा आर्थिक विकास गर्न कुनै अवरोध थिएन । नाँच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेझैं अवरोध त राजनीतिक दल र राज्यको बागडोरमा पालैपालो पुग्ने नेताहरू नै थिए, आर्थिक विकास गर्नेे भिजन, मिशन र एक्शनको अभाव उनीहरूमा नै थियो ।
अहिले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार देशको राजनीतिक प्रणाली फेरिएको छ । देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको छ । एकीकृत राज्य प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । सिंहदरबारले गर्दै आएका कामहरू अब प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्छ भनिएको छ । आजसम्म नागरिकहरूले पालैपालोे सिंहदरबारमा पठाएका दल र यिनका नेतृत्वगण देशका लागि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेझंै विकासमैत्री बन्न सकेका छैनन् । राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि दल र नेताहरूको आचरण फेरिएको छैन । तसर्थ आर्थिक विकासका लागि राज्यसँग अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनाका साथै कार्यान्वयनको रणनीति बनाउन आवश्यक छ ।
देशको विकास राजनीति प्रणाली वा संविधानमा लेखिएका धाराहरूले गर्ने होइन । विकासका लागि भिजन, मिशन र एक्शन भएको राजनेता चाहिन्छ । विधिको शासन चाहिन्छ । भ्रष्टाचार मुक्त, चुस्त, दुरुस्त, जनसेवामैत्री प्रशासनतन्त्र चाहिन्छ । आर्थिक मितव्ययिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता विकास निर्माणका मेरूदण्ड हुन् । देश विकासमा नागरिक एकता र सामाजिक अनुशासन पनि अनिवार्य शर्त हो । जापान, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर र चीनजस्ता मुलुकहरूले नागरिकहरूको देश प्रेम र राष्ट्रिय एकताले माहुरीजस्तै गोलबद्ध भई देश निर्माणमा लागेकाले अग्रगामी छलाङ मार्न सफल भएका हुुन् । तसर्थ सक्षम राजनेता र अनुशासित नागरिकका आधारमा मात्र विकासले गति लिन सक्छ ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा संविधान र कानूनमा लेखिएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्नसक्ने निस्वार्थ राजनेता आजको आवश्यकता हो । देशमा मौलाएको, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, दण्डहीनता, मनपरीतन्त्र, नातावाद, कृपावाद, वैदेशिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक ढिलासुस्तीजस्ता विसङ्गतिहरूको अन्त्य नभई विकासले गति लिन सक्दैन । यसका लागि कार्यकारी प्रमुख सक्षम हुन आवश्यक हुन्छ । साथै राजनीतिक कुसंस्कार हाम्रो देशको विकासको बाधक तत्त्व हो । देशमा आर्थिक विकास गर्ने र नागरिक समृद्घिका लागि काम गर्ने राजनेताको अभाव हुनु देशको दुर्भाग्य हो । नागरिकहरूको समृद्घि जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक वा राजनीतिक विभाजनले हुन सक्दैन । राष्ट्रभाव हरेक नागरिकहरूको राष्ट्रिय गहना हो । तसर्थ सबै तह र वर्गका नागरिकहरूमा राष्ट्रिय एकता र विकासमा सहभागिता गराउन सक्ने सक्षम नेतृत्व आर्थिक विकासको मेरूदण्ड हो ।
उल्लिखित समस्याहरूको समाधान गर्न सकिएमा मात्र मुलुकमा आर्थिक विकासको आधार तयार हुन सक्छ । तत्पश्चात् प्राथमिकताका आधारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू तय गरिनुपर्छ । यसो गर्दा अल्पकालीन विकासका लागि कृषि र पशुपालनको क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक छ । एकातिर युवाहरू रोजगारीको लागि विदेशिएकाले पहाडी क्षेत्रका गाउँबेँशीका खेतबारीहरू बाँझिदै छन् भने अर्कोतिर तराईमा भएको खेतीयोग्य भूमि खण्डीकरण गर्दै बस्ती विकास गरिँदै छ । बाँकी खेती गरिने जमीनमा पनि सिँचाइको अभावले कृषकहरू आकासे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छन् । तसर्थ राज्यले जमीनको प्लटिङलाई सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ र विदेशिएका युवाशक्तिलाई स्वदेशमा नै आयआर्जनको अवसर प्रदान गर्ने कार्य योजना बनाउनुपर्छ ।
केही वर्ष अगाडिसम्म खाद्यान्नको निर्यात गरीे आयआर्जन गर्ने मुलुक अहिले अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, माछा, मासुजस्ता वस्तुहरूमा परनिर्भर हुनुपरेको छ । अब राज्यले अल्पकालीन विकास योजनाअन्तर्गत गाउँगाउँमा आर्थिक विकासको लहर ल्याउन हरेक स्थानीय तहमा आधुनिक र व्यावसायिक कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा भरपर्दो कार्यनीति बनाउनुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा पशुपक्षी र कृषिविज्ञहरूको थिङ ट्याङ्क बनाई देशको जैविक विविधताअनुसार हावा, पानी, माटोलगायतमा अनुसन्धान र सम्भावनाको अध्ययन गरी कृषि र पशुपालनको क्षेत्रलाई वैज्ञानिक र व्यवसायीकरण गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । कृषिमा लाग्ने कृषकहरूलाई उन्नत बीउबिजन, मल, औषधि, नश्ल सुधार आदिको व्यवस्था, उपलब्धता र प्रशिक्षण दिइनुपर्छ । राज्यले आर्थिक अनुदान, सहुलियत ऋण, बजार व्यवस्थापन, बीमाको व्यवस्थालगायत सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ ।
न्यूजील्याण्डले कृषि र पशुपालनबाट नै देशको आर्थिक समृद्धिमा फड्को मारेझैं नेपालले पनि आधुनिक कृषि र पशुपालनलाई वैज्ञानिक तरीकाले विकास गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा विभिन्न उमेर समूहका नागरिकहरूलाई उनीहरूको इच्छा र चाहनाअनुसारका व्यावसायिक तालीमहरू सञ्चालन गरी गाउँगाउँमा तरकारी, फलफूल उत्पादन गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ । यसो भएमा गाउँगाउँमा आलु, गोलभेडा, लसुन, प्याज, बन्दा, काउली, मोटर, धनियाँ, अदुवा, अलैंची, केरालगायत लहरे तरकारी, सागसब्जीको उत्पादन हुन शुरू गर्छन् । यसका साथै फलफूल, पुष्पखेती, रेसम खेती, माहुरीपालनलगायत आयआर्जनका स्रोतहरूको विकास गर्दै जानुपर्छ । उन्नत जातका गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा, पशुपक्षीलगायतमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी आयआर्जनका स्रोत बढाउन सकिन्छ ।
पर्यटन उद्योगको विकास हाम्रोजस्तो देशका लागि आर्थिक समृद्धिको आधार हो । नेपाल प्राकृतिक रूपले विश्वको दोस्रो सुन्दर मुलुक हो । विश्व समुदायलाई आकर्षित गर्नसक्ने हिमालहरूले भरिभराउ भएको यो देश ताल, नदी, झर्ना र भञ्ज्याङहरूले मेचीदेखि महाकालीसम्म सजिएको छ । नेपाल विविध जातजाति, भाषा र संस्कृतिको सङ्गमस्थल पनि हो । पानीका लागि विश्वमा नै दोस्रो स्थानमा रहेकाले जलक्रीडाका लागि आकर्षक गन्तव्य हो । मन्दिरै मन्दिरको शहर भनेर विश्व समुदायका परिचित काठमाडौं शहर र विश्व सम्पदासूचीमा परेका सूचीकृत पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक र धार्मिकस्थलहरू पर्यटकका खोजाइ र रोजाइ हुन् । विश्वका मानिसहरूको खर्च गर्ने आकर्षक ठाउ“हरू हुन् । पर्यटकका लागि ज्ञान र मनोरञ्जनका स्थान हुन् । तसर्थ राज्यले पर्यटन उद्योगअन्तर्गतका आधारभूत आवश्यकताको विकास, प्रचारप्रसार र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
अन्त्यमा दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत यातायात, सञ्चार, जल, जमीन, जङ्गल, जडीबुटी, प्राकृतिक खानी, खजानाहरूको क्षेत्रलाई अनुसन्धान, उत्खनन, प्रयोग र व्यवसायीकरण गर्दै आर्थिक विकास गर्न राज्यले ढिला नगरोस् ।
लेखक शिक्षाविद् हुन् ।
खुला बजार कि बन्द बजार
५ चैत्र २०७४, सोमबार ०५:४७
अर्थमन्त्रीको चमत्कार मिथक कि वास्तविक
५ चैत्र २०७४, सोमबार ०५:४३
आर्थिक समृद्धिको यात्रा (३)
४ चैत्र २०७४, आईतवार ०५:३३
भद्र सहमतिको अभद्र अन्तर्य
१ चैत्र २०७४, बिहीबार ०५:३९
पुटिन पुनः निर्वाचित
१ः१ अनुपातमा हकप्रद जारी गर्न लागेको नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण
उपराष्ट्रपतिले लिए सपथ
सोलार जडित सडक बत्ती
स्वयम्भू स्तुपा परिसरमा हस्तकलाका सामग्री
नवनिर्मित भवनबाट एभरेष्ट बैङ्कको कारोबार
डेपुटी गभर्नरबाट ओमका अध्यक्षले लिए सपथ
मस्यौदा नहुँदा कानून बनाउन ढिलाई, १५ दिनभित्र मस्यौदा पठाउन कानून मन्त्रीको निर्देशन
तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तु धितो राखेर कृषकलाई भण्डारण कर्जा
उत्खनन हुन नसक्दा करोडौँको शिलाजित अलपत्र